सन्तपुर एकिकृत बस्ति निर्माण सम्पन्न गर्न धुर्मुसलाई ४ करोड अपुग - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सन्तपुर एकिकृत बस्ति निर्माण सम्पन्न गर्न धुर्मुसलाई ४ करोड अपुग
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार १५:३६
काठमाण्डौ   कार्तिक २२ ✎
जति जति माघ २४ नजिकिदै छ सिताराम कट्टेल धुर्मुसलाई चिन्ता बढदै छ । सन्तपुर एकिकृत बस्ती निर्माणमा दिनरात खटेका धुर्मुसका अनुसार बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न अझै झण्डै चार करोड चाहिन्छ । निर्धारित समय माघ २४ गते हस्तान्तरण गर्न लक्ष्यका साथै अघि बढेको निर्माणकार्यको लागत बढेको छ । तर उनि जसरी पनि बचन पुरा गर्न लागि परेका छन । आज हामीले यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर धुर्मुस संग आजको गफ गाफ गरेका छौ ।
जुन हिसाबमा सहयोग आउनुपर्ने थियो बिभिन्न कारणले अलिक सुस्त देखिएको छ
यति बेला हामी रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगापुर स्थित सन्तपुर भन्ने ठाँउका दलित र पिछडिएकाहरुको लागि मात्र नभई बाढी पीडितहरुको लागि वस्ती निर्माण गरिरहेको छौ । उनीहरुको लागि जटिल भनेको आर्थिक स्थिती नै रहेको छ । निर्धारित समय माघ २४ गते हस्तान्तरण गर्न लक्ष्यका साथ अघि बढिरहँदा दैनिक २५० भन्दा बढी मान्छेहरुले यहाँ काम गरिरहेका छन । दैनिक २५० मानिसले काम गरिरहँदा सामाग्री पनि झर्नु पर्यो । सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नको लागि जटिल छ । हाम्रो यो परियोजनमा सहयोग गर्नु हुने महानुभावहरुले सहयोग गरिरहनुभएको थियो त्यसैले यसमा सहयोग नजुटेको भन्न मिल्दैन ।
तर यसमा जुन हिसाबमा सहयोग आउनुपर्ने थियो त्यसमा बिभिन्न कारणले अलिक सुस्त देखिएको छ । त्यसको बिबिध कारण छन जस्तै अहिले देश भरी नै चुनाबी माहोल छ । यसै बिचमा ठूला ठूला चाडपर्वले गर्दा पनि अलिकति मार्ग बदल्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा अझै सहयोग जुट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको चिन्ता छ । साथै यहाँको जटिल समस्या भनेको चाहि यहाँ हामी दैनिक २५० जना मानिस खटिएका छौ । जाडो शुरु भईसकेको छ चिसो अझै बढेको अवस्था छ । काम गर्ने साथीहरुलाई लागि ओड्ने ओछ्याउनेको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । थप पीडा भएको परिवारहरुलाई पनि लत्ता कपडाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
यदी कसैले धुर्मुस सुन्तलीलाई हामीले पनि सहयोग गर्न पाएहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो मोबाईल नम्बर ९८०३४७२४७६ मा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ । त्यसै गरी धुर्मुस सुन्तलीको पनि छुटै ल्यान्डलाईन नम्बर छ । धुर्मुस सुन्तलीको फेसबुक पेजमा सम्पूर्ण कुरा लेखिएको छ । हाम्रो पुरानो बानेश्वरमा कार्यलय छ त्यहाँगएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । चन्द्रपुरको सन्तपुर भन्ने ठाँउमा एउटा वस्ती बनिरहेको छ । त्यहाँ आएर पनि तपाईहरुले सक्दो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले पैसा मात्र नभएर खानपिन र ओडने ओछाउनेको सामाग्रीहरुको पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । छ करोडको अनुमानित परियोजना सन्चालन भईरहेको छ । पहिला पाँच करोड पचहत्तर लाखअनुमनित बजेट सार्वजनिक गरेका थियौ । पहिले घर संख्या पैतालिस थियो अहिले सत्चालिस भएको छ ।
अहिले सम्रचना र विद्यालय पनि थपिएको कारणले अनुमानित बजेट लगभग पाँच करोड पन्चानब्बे लाखपुगेको छ । अहिले आर्थिक स्थितीको अभाव भएता पनि धेरै तिरबाट सहयोगी हात बढाउने मनकारीहरु हुनुभएकोले हामी निकै आशावादी छौ । साउनको अठार गतेबाट अविरल वर्षा भई रहँदा त्यही दिन देखि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आजको मिती सम्म पनि निरन्तर ति बाढी पिडितको लागि काम गरिरहेको छ । तराईमा यति धेरै पिडा र अभाव छ । देशको बिकासका लागि र राजनीतिक निकासका लागि चुनाव हुनुपर्छ तर त्यो भएको छैन । त्यो दुखलाई अनि बाढी पीडितलाई साथ दिनको लागि हामी निरन्तर रौतहटमा खटेका छौ ।
सहयोगी मनलाई यो अभियानमा जुट्न भन्छु । यो एउटा पुण्यको कामहो । पवित्र कामहो । एउटा मानविय धर्म निर्वाह गर्ने काम हो । एउटा आत्म सन्तुष्टीको काम पनि हो । हाम्रो सानो सहयोगले पीडित तथा बालबालिकाको मुहारमा खुशी आउँछ त्यसैले सबै जना यो मानविय धर्म निर्वाह गर्ने अभियानमा जुटिदिनु हुन आग्रह गर्छु ।
कोही अभिभावकले आफ्नो साना साना बालकको जन्मदिन नमनाएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । यो देखेर खुशी लाग्छ ।
धुर्मुस सुन्तलीले बनाउन लागेको बस्तीको वातावरण कस्तो छ ? त्यहि ठाँउ नै तपाईहरुले किन रोज्नुभयो?
हामीले एकिकृत वस्ती निर्माणको शुरुवातगर्दै अगाडी बढिरहेको हुनाले र हाम्रो योजना नै नमुना वस्ती हो । एउटा मात्र घर बनाउँदै जाने हो भने धेरै पीडितको लागि घर बनाउँन सकिदैथ्यो होला । जहाँ घर भत्किएको छ त्यहाँ नै जग खनेर घर बनाउँन छिटो पनि हुन्छ र झन्झटिलो पनि हुदैन । तर त्यहाँको समाजमा जो जो पीडितहरु छन त्यहाँको लागि घर बनाउने देखि लिएर सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड बाटो घाटो एउटा कम्पाउन्ड भित्र रहेर सबै कुरा गर्दै एउटा वस्ती बनाई रहँदा खेरी त्यसको लागि आफ्नो स्वामित्वमा आफ्नो जग्गाहुन जरुरी छ । तराईको धेरै ठाँउमा अहिले पनि जग्गाहरु छन ।
त्यहाँ एकिकृत वस्ती विकास गर्न कि सरकारले नै योजना लिएर अगाडी बढ्नुपर्यो । कुनै व्यक्ति अथवा कुनै संस्थाले गर्नको लागि व्यक्तिकै जग्गा हुन आवश्यक हुन्छ । रौतहट जिल्लामा पनि यो भन्दा धेरै पिडा भएको धेरै ठाँउहरु छन । त्यहाँ हामीले एकिकृत व्यस्ती निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो ठाँउमा भने कसैको एक धुर दुई धुर तीन धुर जग्गा थियो र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा भएको कारणले हामीले यो सन्तपुर भन्ने ठाँउलाई नै रोज्यौ ।
‘रोमियो’सबै उमेर समूहले हेर्न पाउने
अग्नीदहनको फस्ट लुक पोस्टर र टिजर सार्वजनिक
दिनेश डिसीको ‘ट्वाक्क टुक्क’